डा. संगीता भण्डारी – Health Post Nepal
यो वर्ष हामी दोहोरो शोकमा छौँ । बुबा र ससुराबुबा यसै वर्ष स्वर्गीय हुनुभएकाले दसैँ मनाउँदैनौँ । यसै पनि प्रतिष्ठानको काम धेरै हुने भएकाले कार्यालयको काममै व्यस्त हुन्छु ।
अघिल्ला वर्षहरूमा चाडपर्व आउँदा धेरै खुसी लाग्थ्यो र मनाउने पनि गर्थें । काम पनि आफ्नो हिसाबले गर्ने र समय मिलाएर पर्व पनि उत्साही हुँदै मनाउने गर्दै आएको छु । सानो छँदा भने एक महिनाअघिदेखि नै दसैँ कहिले आउला भनेर दिन गनेर बसिन्थ्यो । बाल्यकालमा चाडबाड एकदमै रमाइला लाग्थे । मान्छे ठूलो हुँदै गएपछि चाडबाडको रमाइलोपन पनि कम हुँदै जाने रहेछ, अन्य दिनझैँ सामान्यजस्तै नै बन्दो रहेछ । यद्यपि, केही फरक भने हुन्छ नै ।
दसैँमा घटस्थापनादेखि नै मन्दिर दर्शन गर्ने, राम्रो लुगा लगाउने, मिठो खाने, परिवारसँग बस्ने गर्ने गरिन्थ्यो । दसैँ त त्यसवेला थियो, जब वर्षभरि लगाएको एउटै लुगा फुकालेर नयाँ लुगा लगाउन पाइन्थ्यो । दसैँको समयमा ल्याइदिएको नयाँ लुगा लगाएर सुत्दा त्यसको बास्नाले नै मिठो निद्रा आउँथ्यो ।
दसैँ त त्यसवेला थियो, जब वर्षभरि लगाएको एउटै लुगा फुकालेर नयाँ लुगा लगाउन पाइन्थ्यो । दसैँको समयमा ल्याइदिएको नयाँ लुगा लगाएर सुत्दा त्यसको बास्नाले नै मिठो निद्रा आउँथ्यो । मान्छे ठूलो हुँदै गएपछि चाडबाडको रमाइलोपन पनि कम हुँदै जाने रहेछ, अन्य दिनझैँ सामान्यजस्तै नै बन्दो रहेछ । दसैँ आयो कि त्यही बाल्यकालमा फर्किऊँझैँ लाग्छ ।
दसैँमा रमाइलो गर्ने, नयाँ लुगा लगाउनेजस्ता क्रियाकलापमा पहिलेजस्तो सोख छैन । सामान्य रूपमा आमाबुबा, साथीभाइसँग भेटघाटमा समय बिताउँछु । यस्तो लाग्छ, दसैँ जति मनाउनु थियो, बाल्यकालमै मनाइयो । अहिले पनि ती क्षण सम्झिएर साह्रै आनन्द आउँछ, पुनः बाल्यकालमा फर्किऊँजस्तो लाग्छ ।
यसपालि दसैँ नमनाउने भएकाले पनि अस्पताललाई सबै समय दिन्छु । अस्पतालमा रहेका कर्मचारी तथा डाक्टरहरूलाई आफू बसेर भए पनि सिफ्टअनुसार ड्युटी मिलाएर अस्पतालको सेवा सुचारु गर्छु । इमर्जेन्सीमा २४ घण्टै डाक्टर राखेर सेवा दिनेछौँ । केही दिन ओपिडीसेवा बन्द रहे पनि आएका बिरामीलाई सेवा दिएरै फर्काउँछौँ ।
Posted in उपचार अनुभुतिTagged डा. संगीता भण्डारी, डाक्टरको दसैँ, दसैँ अनुभूति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानLeaveaComment on यो वर्ष दसैँ छैन, प्रतिष्ठानकै काममा व्यस्त